Ngiyilungisa kanjani i-OneNote eyonakele? - I-Onenote
Main > I-Onenote > I-Onenote wont open - unquma kanjani
I-Onenote wont open - unquma kanjani
Ngiyilungisa kanjani i-OneNote eyonakele?
2. KuI-OneNote, iya kufayela -> Ulwazi -> Vula izipele, bese uvula isipele sakamuva. Uma ifayili libukeka lilihle, ungalihudulela encwadini yakho yokubhala bese ususa ifayela le-konakeleifayela. Futhi ungasebenzisaUkulungiswa kwe-OneNoteAmathuluzi.21 umhlaka 2014
Uke ube nezinkinga zokuvumelanisa ze-OneDrive ezinjengalezi.
Kuyinkinga ejwayelekile, kanye nezinye izinto ezimbalwa ezenzeka nge-OneDrive, futhi ngizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani. Nazi izinyathelo engizithathayo ukulungisa lezi zinkinga ezivamile zokuvumelanisa ze-OneDrive. Isinyathelo sokuqala - hambisa igundane lakho phezu kwalo bese ubona ukuthi lithini.
Qaphela ukuthi Ukuvumelanisa Amafayela 1 Okusele kuyavela. Ngakho-ke kukhona ifayili elinezinkinga zokuchofoza kwesokudla, uma kunenkinga yokuvumelanisa uzonikezwa inketho yemenyu ethi 'Buka izinkinga zokuvumelanisa' kuleli cala ezingekho. Ngakho-ke siyazi ukuthi sinefayela, ngakho-ke okumele ukwenze ukubuka lelo fayela bese uthola ukuthi kwenzekani.
Khetha Vula ifolda yakho ye-OneDrive yeBhizinisi kusuka kumenyu bese ubheka ibhokisi lokuhlola eliluhlaza elingamakiwe ohlwini. Ungabona lapha ukuthi le folda yephrojekthi ayihambelani kahle. Yivule bese ubheka ifayili ebelingavumelanisi futhi uyabona lapha ukuthi leli fayela ledokhumenti lohlu lwephrojekthi le-2018 alivumelanisi.
Isixazululo esisheshayo engivame ukusenza ukuthatha leli fayela bese ulihudulela kudeskithophu yakho. Qiniseka ukuthi isusiwe ohlwini. I-OneDrive izama ukuvumelanisa ifayela futhi.
Manje bheka i-OneDrive yakho futhi uzothola ukuthi ayisenazo izinkinga ngokuvumelanisa. Kulesi simo singalihudulela lapha leli fayela futhi lizophinde livumelaniswe futhi izingqinamba zixazululwe. Manje lapho uthola leli fayela uzobona ukuthi linophawu lokuhlola oluhlaza kulo.
Uma ubona i-View Sync Problem kumenyu yakho, imvamisa yingoba wephule omunye wale mikhawulo yefayela nefolda. Awukwazi ukuvumelanisa amafayela ngamanye nge-15 GB. Igama lefayela eliphezulu yizinhlamvu ezingama-400.
Awukwazi ukusebenzisa noma yiziphi zalezi zinhlamvu ezingavumelekile. Awukwazi ukusebenzisa la magama wamafayela futhi. Futhi awukwazi ukusebenzisa la magama kumafolda.
Futhi qaphela ukuthi uma weqa amafayela ayi-100,000, uzohlangabezana nezinkinga ezithile zokusebenza ngokuvumelanisa futhi ekugcineni, i-OneDrive yeBhizinisi ikhawulela umsebenzisi ngamunye ku-1TB wesitoreji esiphelele. Uma uzame ukususa ifayili futhi ulibuyisela endaweni ye-OneDrive, futhi ulungise yonke imiba yokuvumelanisa ukubuka, kepha usenezinkinga zokuvumelanisa ku-OneDrive, kunenye inketho engicabanga ukuthi iyaphumelela ukulungisa ukufakwa kwehhovisi lakho. Iya ku-Panel Yokulawula, iya kokuthi Izinhlelo Nezici, thola i-Microsoft Office 365 yakho, chofoza inkinobho ethi Shintsha bese ulungisa ngokushesha.
Chofoza inketho yokulungisa ukuvala zonke izinhlelo zakho ze-Microsoft Office bese wenza ukulungisa. Lapho ukulungiswa sekuphelile, kuhlole bese ubona ukuthi kuyasebenza yini. Enye into ongayihlola engathinta ukuvumelanisa ukuvuselelwa kweWindows.
Qiniseka ukuthi awunazo izibuyekezo ezilindile noma izibuyekezo ezidinga ukuqala kabusha njengoba kukhonjisiwe lapha njengoba lokhu kungaphazamisa inqubo yokuvumelanisa. Uma usuqede ezinye izinketho futhi usenezinkinga ngokuvumelanisa, kungadingeka ukuthi ume uphinde uqalise inqubo yokuvumelanisa futhi, engingakukhombisa yona lapha. Qhafaza kwesokudla i-OneDrive, ukhethe i-StopSyncing a Folder, qhafaza Stop Syncing, bese uchofoza u-Yebo.
Qhafaza KULUNGILE bese ukuvumelanisa kuzoma. Manje, ngaphambi kokuvumelanisa futhi, kuwumqondo omuhle ukuya ku-C drive yakho bese ubheka ifolda yakho yasekhaya bese ushintshela ku-akhawunti yakho ethile yomsebenzisi. Uzobona ukuthi kune-OneDrive ne-OneDrive yeBhizinisi ngaphandle kwezinguquko zokuvumelanisa, kwesinye isikhathi ziningi.
Bheka lapho ubone ukuthi awekho amafayela angavumelaniswanga. Uma engekho, ngincamela ukususa empeleni lawa mafolda bese ngiwakha kabusha lapho ngivumelanisa futhi. Ungabona futhi indawo yakho yefayela le-OneDrive nawo wonke amafolda.
Kungaba wusizo ukuhambisa lawa mafayili endaweni ye-OneDrive yokuvumelanisa, usebenzise ukuvumelanisa ngakho-ke kuyashesha impela, bese ukopisha amafayela lapho eseqedile. Ngakho-ke ngizokhetha wonke amafayela, ngiwathumele kudeskithophu yami, noma kwenye indawo. Manje ngichofoza kwesokudla ku-Sync New Library futhi futhi kufanele ikhombise izinketho zokuvumelanisa nefolda yakho.
Kwesinye isikhathi ngeke ubone indawo bese kungadingeka ukuthi ubuyele emuva uyolungisa ifolda yakho bese ufaka iHhovisi futhi ngaphambi kokuvumelanisa empeleni, kepha kulokhu ngizovumelanisa manje. Ingibuza ngokusemthethweni imininingwane yokuxhumana. Ngikhetha i-akhawunti yomsebenzi noma yesikole bese ngingena ngemvume njengoba ngenza ku-Office 365 bese ngingena ngemvume.
Kuzoqala ukuvumelanisa amafayela futhi ungachofoza inkinobho ukubona indawo. Uzobona ukuthi uphawu lokuhlola oluhlaza luvunyelwe kumafolda avumelaniswayo futhi i-1 yengezwa ekugcineni kwegama lefolda ukuze lihlukaniswe nelokuqala engilivumelanise ekuqaleni. Uzobona ukuthi zombili zibhalwe lapha.
amawindi 7 boot.ini
Ukubona isimo sokuvumelanisa, ungaya ku-OneDrive bese ubona ukuthi sekusele ama-161. Uma usuqedile kufanele ubone uphawu lokuhlola oluhlaza lapho futhi kungasali lutho ekuvumelaniseni kwakho kwe-OneDrive. Manje ungaqhathanisa amafayela lapha nalawo owasuse endaweni endala uma nje ufuna ukuqiniseka ukuthi akukho okulahlekile futhi manje usungasusa indawo yokuqala ye-OneDrive njengoba ingenalutho futhi ingasadingeki.
Sethemba ukuthi esinye salezi zixazululo sasebenza ukuze ukwazi ukulungisa izinkinga zakho zokuvumelanisa ze-OneDrive. Uma unezinkinga sicela uphawule. Ngiyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo yakho.
Siyabonga ngokubuka. Sawubona, uma ufuna ukubona izindatshana eziningi ezinjengalezi sicela ubhalise futhi uma ngabe uyithandile le ndatshana chofoza izithupha bese ushiya amazwana. Ngiyakwazisa kakhulu ukuxhaswa kwakho!
Kuyini ukusetha kabusha i-OneNote?
Setha kabushauhlelo lwakho lokusebenza lususa inqolobane ukuze zonke izincwadi zakho zokubhala zizosuswa kudivayisi, liphinde lisethe kabusha okuncamelayo nolwazi lwakho lokungena ngemvume. Ngemuvaukusetha kabushauhlelo lokusebenza uzobuyela esimeni esisha sha njengalapho ufake uhlelo lokusebenza okokuqala ngqa.
NginguMax Dalton futhi kule ndatshana ngizochaza ukuthi ukusebenzisa kanjani ukuvikelwa kwephasiwedi kuhlelo lokusebenza lweMicrosoft OneNote. IMicrosoft OneNote iyithuluzi elinamandla lokuthatha amanothi nokuhlela eliyingxenye yohlu lwemikhiqizo ye-Microsoft Office. I-iOS ifaka phakathi uhlobo lohlelo lokusebenza olukhishwe yi-Microsoft ukusebenza okuningi okuyisisekelo kwinguqulo yedeskithophu yohlelo lokusebenza futhi lukhululekile ukusebenzisa.
Awufuni ukuthi wonke umuntu owabelana naye abone yonke into. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi ungazivikela kanjani ngephasiwedi izingxenye zakho zamanothibhuki, nokuthi ungashintsha futhi ususe kanjani lokho kuvikelwa kwephasiwedi. Lo mbhalo uzokuhambisa kuzo zonke izici zokusebenzisa ukuvikelwa kwephasiwedi kuhlelo lokusebenza lweMicrosoft OneNote.
Ungasivikela kanjani ngephasiwedi isigaba. Isinyathelo 1. Zulazulela ku-notebook kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-OneNote iOS olunengxenye ongayihlela ngePhasiwedi Vikela Isinyathelo 2. Thepha u-'Hlela 'ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Ikhona lesikrini. Imibuthano engenamithunzi ivela phakathi kwezigaba ezinemibala ohlangothini lwesobunxele kwesikrini negama lesigaba ohlangothini olungakwesokudla kwesikrini. Isinyathelo 3.
Thepha umbuthano ongakwesobunxele sesigaba ongathanda ukuthi ukuvikelwa kwephasiwedi kungezwe ngakho isiyingi manje sesigcwele umthunzi onsomi kanye nophawu olumhlophe lokuhlola. Isinyathelo 4. Thepha isithonjana sokukhiya ohlwini lwezithonjana ezansi kwesikrini.
Isinyathelo 5. Khetha 'Vikela Lesi Sigaba'. kumenyu ekhonjisiwe.
Isikrini sokuvikelwa kwephasiwedi siyakhonjiswa. Isinyathelo 6. Faka iphasiwedi ofuna ukuyisebenzisa ebhokisini lePhasiwedi, bese uthayipha iphasiwedi efanayo futhi ebhokisini lokuQinisekisa.
Isinyathelo 7. Thepha ku-'Kwenziwe '. Iwindi lokwengeza iphasiwedi.
Ibha yenqubekela phambili izovela maphakathi kwesikrini, ikhombise isimo sokusetshenziswa kokuvikelwa kwephasiwedi esigabeni osisebenzise kuso. Ngemuva kokuthi iwindi le-Add Password linyamalale, uzomiswa esikrinini ukhombisa okuqukethwe kuleyo notebook, isigaba ngeke sikhiyelwe kuwe uze uvale uphinde uvule uhlelo lokusebenza. Noma ngubani owabelana naye indawo yamanothi ekhiyiwe kufanele afake iphasiwedi ngaphambi kokuthi abuke okuqukethwe yizindawo ezikhiyiwe.
Ungayifaka kanjani iphasiwedi yombuso. Isinyathelo 1. Zulazula uye endaweni engxenyeni ethile ye-Notebook ofuna ukuyifinyelela.
Uma leso sigaba sivikelwe ngephasiwedi, isithonjana sokukhiya sizovela ngakwesokudla saleso sigaba. Isinyathelo 2. Thepha igama lesigaba.
Isikrini sokuvula isigaba sizovela. Isinyathelo 3. Faka iphasiwedi yesigaba esithile emkhakheni wephasiwedi bese uthepha ku-'Vula 'ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Uma iphasiwedi ilungile, uzobuyiselwa esigabeni ozame ukusivula futhi okuqukethwe kuleso sigaba manje kuzotholakala. Ungayishintsha kanjani iphasiwedi yesigaba Isinyathelo 1. Zulazulela ku-notebook kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-OneNote iOS olunengxenye ekhiyiwe lapho ufuna ukushintsha khona iphasiwedi.
i-disabled teredo endaweni yangakini
Isinyathelo 2. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, thepha Hlela. - Imibuthano enombala ivela phakathi kwezingxenye zamathebhu ezinemibala ohlangothini lwesobunxele kwesikrini negama lesigaba ngakwesokudla kwesikrini.
Isinyathelo 3. Thepha umbuthano ongakwesobunxele sesigaba ofuna ukusishintsha iphasiwedi ukuze indilinga manje isibotshwe ngokunsomi futhi inophawu olumhlophe lokuhlola. Isinyathelo 4.
Thepha isithonjana sokukhiya kuhlu lwezithonjana ezansi kweSinyathelo 5. Kumenyu evelayo, khetha u-'Guqula Iphasiwedi '. Isikrini 'Sokushintsha Iphasiwedi' siyavela.
Isinyathelo 6.A Guqula Iphasiwedi Iwindi livela phakathi kwesikrini likhombisa isimo senguquko esigabeni sokuvikelwa kwephasiwedi yencwadi yokubhalela. Ngemuva kokuthi iphasiwedi isishintshiwe, uzomiswa esikrinini sasekhaya saleyo notebook.
Ngokuzayo lapho uzama ukungena esigabeni kule notebook, kuzofanele ufake iphasiwedi entsha ukuze uyibuke. Ungakususa kanjani ukuvikelwa kwephasiwedi esigabeni. Isinyathelo 1.
Zulazulela ku-notebook kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-OneNote iOS olunengxenye lapho ufuna ukususa khona iphasiwedi. Isinyathelo 2. Thepha 'Hlela' ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
t Ikhoneni lesikrini. Imibuthano engenamithunzi izovela phakathi kwezingxenye ezinemibala ohlangothini lwesobunxele kwesikrini negama lesigaba ngakwesokudla kwesikrini. Isinyathelo 3.
Thepha umbuthano ongakwesobunxele sesigaba ofuna ukusisusa iphasiwedi ukuvumela umbuthano manje ugcwale izithunzi ezibubende kanye nophawu olumhlophe lokuhlola. Isinyathelo 4. Thepha isithonjana sokukhiya ohlwini lwezithonjana ezansi kwesikrini.
Isinyathelo 5. Khetha 'Susa Iphasiwedi'. kumenyu ekhonjisiwe.
Isikrini sokukhipha iphasiwedi siyakhonjiswa. Isinyathelo 6. Faka iphasiwedi yalesi sigaba ebhokisini lePhasiwedi, bese uthepha okuthi 'Susa' ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini.
Iwindi lokususa iphasiwedi lizovela maphakathi kwesikrini elibonisa isimo sokususa ukuvikelwa kwephasiwedi kuleso sigaba encwadini yokubhalela. Ngemuva kokuthi ukuvikelwa kwephasiwedi kususwe ngempumelelo, uzoqondiswa kusikrini sasekhaya sale notebook. Ngokuzayo, akufanele usacelwa ukuthi ufake iphasiwedi ukufinyelela i-notebooksection kunoma iyiphi idivayisi.
Kwenzekeni ku-OneNote ku-Office 2019?
IMicrosoft ingena esikhundleni senguqulo yedeskithophu ye-I-OneNotene Windows 10 inguqulo kuIhhovisi 2019, kanye nokwenza konkeIhhovisi 2019I-standalone suite isebenza kuphela ku-Windows 10. IMicrosoft ibilokhu iyithuthukisa kancane kancaneI-OneNoteWindows 10 uhlelo lokusebenza ezinyangeni ezedlule, futhi inkampani ihlela izici ezintsha ngokuzayo.
Sanibonani nonke, wamukelekile kulesi sihloko! Ake sibheke ngokuphelele zonke izici zeMicrosoft OneNote 2019 futhi sibone konke odinga ukukwazi ukuze uqalise! Vakashela isiteshi sethu se-YouTube kanye newebhusayithi esemthethweni ukuthola izindaba eziningi, amathiphu, nokuqukethwe okwengeziwe kuyo yonke imikhiqizo esiyembozayo! I-Microsoft OneNote ingumkhiqizo ophelele wokubhala amanothi, ukugcwalisa imidwebo nokugcina imininingwane kukhompyutha yakho, ithebhulethi noma i-smartphone enendawo yokusebenza elula futhi ebalulekile efana nekhophi yedijithali.
Ngale nguqulo ka-2019, i-OneNote ayidingi okubhaliselwe kweHhovisi njengoba ifakwa njengohlelo lokusebenza lwamahhala ku-Windows 10. Akusebenzi kuzinguqulo ezindala zeWindows futhi uma une-Mac ungalanda lo mkhiqizo mahhala ngqo kusuka ku- Mac App Store. Indawo yokusebenza enkulu ye-OneNote ilula kakhulu: phezulu ibha yamathuluzi equkethe yonke imisebenzi namathuluzi atholakalayo; Ngakwesobunxele indawo yokuzulazula enawo wonke amanothi agcinwe ku-OneNote futhi ngakwesokudla ukubuka kuqala okukhulu lapho ungangena khona, udwebe futhi uxhumanise amafayela.
Indawo yokuzula ikhombisa ukwakheka okuyisisekelo kwemibhalo yonke ku-OneNote. Izincwadi zokubhala zingamaqoqo amakhulu ezahluko ezinemibala ezibizwa ngezigaba. Bese kuthi esigabeni ngasinye ube nawo wonke amakhasi anamanothi, imidwebo nokunamathiselwe.
Ungachofoza incwadi yokubhalela noma isigaba ukuyivula bese ukhetha noma yiliphi ikhasi ukuze ulibone ekubukeni kuqala. Okokuqala, i-OneNote inencwajana ejwayelekile enamakhasi aqukethe amathiphu ahlukahlukene neziphakamiso zokusebenzisa umkhiqizo. Ungakha izincwadi zokubhalela, izigaba, noma amakhasi amasha ngokuchofoza kwesokudla endaweni engenalutho noma ngokusebenzisa izinkinobho zokuhlanganisa ezingezansi.
Noma yiziphi izinguquko nokuhlelwa okwenziwe kudokhumenti ye-OneNote kugcinwa efwini njalo lapho ubona isithonjana sokuvumelanisa encwadini yokubhalela. Ungaguqula izilungiselelo zamafu ngokuya kwinkinobho yokugcina ngakwesokudla bese kuthi Izilungiselelo, Izinketho. Ungaphatha izincwadi zakho zokubhalela, izigaba, namakhasi ngokuchofoza ngakwesokudla ukuze uqambe kabusha, ususe, noma ushintshe umbala wazo.
Ukuze ulungise i-oda labo, mane uchofoze bese uhudulela elilodwa phezulu noma phansi. Ake sibone ukuthi usebenza kanjani namakhasi. Ikhasi elisha alinalutho ngokuphelele futhi likhombisa usuku lokudala nehora phezulu.
Faka ngaphezulu ukuqamba kabusha ikhasi bese ulinika isihloko. Bese uchofoza noma yikuphi ekubukeni kuqala ukuze umise isikhombisi bese uqala ukuthayipha. Ungavula futhi ithebhu yokubuka ukusetha ukubukeka kwekhasi, isb.
B. umbala ongemuva onombala wekhasi nokuhleleka ngerula noma iGridLines Pheqa ngokubamba phansi ukhiye we-CTRL noma we-CMD bese usebenzisa isondo legundane. Ungasebenza futhi kwimodi yesikrini esigcwele ngokusebenzisa inkinobho yomcibisholo ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
zune iphutha lokubuyekeza
Njengoba usebenza ekhasini, wenza izinto ezizimele ezibizwa ngamanothi aqukethe izingcezu zombhalo, izixhumanisi, amatafula, kanye nokufaka okunamathiselwe ngaphakathi kohlaka olimpunga. Ake sihlole lokhu ngokuningiliziwe. Uma uthayipha ngaphakathi kwekhasi, umbhalo wenothi uyakhiwa oqoqa sonke isigaba ngaphakathi kohlaka lwaso olimpunga.
Ungasebenzisa ithebhu Ekhaya ngenhla ukulungisa izakhiwo zombhalo ezifana nefonti, usayizi, isitayela, umbala, nokuqondanisa. Lezi zinguquko zisetshenziselwa igama elilodwa ukuthi isikhombisi sakho segundane siphelile. Ungachofoza uhlaka olumpunga ngenhla ukukhetha wonke umbhalo bese uwuhlela ngokuphelele.
i-fantom ishayela ukuxazulula inkinga
Ungangeza namathegi awusizo kunoma yimuphi umugqa wombhalo usebenzisa inkinobho yamaTag ethebhu Yasekhaya. Lokhu kufaka phakathi izithonjana ezijwayelekile kanye nesithonjana sokwenza okufanele uchofoze ukumaka ukuthi kwenziwe. Esikhundleni salokho, sebenzisa okuthi Dala umaki omusha ukudala umaki wangokwezifiso.
Ungasebenzisa futhi ithebhu Faka ukufaka okuqukethwe okwengeziwe ekhasini. Sebenzisa Symbol ukwengeza izinhlamvu ezikhethekile ne-Link ukufaka ama-hyperlink achofozekayo ezingxenyeni zombhalo. Sebenzisa ithebula ukuchaza itafula nge.
ukungenisa inani lemigqa namakholomu. Bese uchofoza noma iyiphi iseli ukuyifaka. Lokhu kuzolungiswa ngokuzenzakalela kokuqukethwe kombhalo, kepha ungasetha usayizi weseli ngokwakho ngokuchofoza nokuhudula imingcele yawo.
Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa indawo yetafula ukulungisa ukwakheka kwetafula, engeza noma ususe imigqa namakholomu, futhi ulungise umbala wamaseli akhethwe ngokufiphaza. Chofoza Fihla Imingcele ukufihla noma ukukhombisa imingcele yeseli. Sebenzisa ifayela ukuphequlula nokungenisa okunamathiselwe kusayithi lakho.
Lokhu kungezwa njengamanothi alula anegama nesimbuli ngaphakathi kohlaka olimpunga. Ungawavula lawa mafayela ngokuchofoza kabili kuwo. Sebenzisa Izithombe ne-PDF ukwengeza izithombe nemibhalo ye-PDF ngokubuka kuqala okugcwele okuvulekile endaweni yokusebenza ye-OneNote.
Ungangenisa amatafula, amafayela nezithombe ngaphakathi kwenothi lombhalo elikhona ukuze uzigcine zixhumene nohlaka. Vele uye kulayini omusha bese ungenisa okuqukethwe usebenzisa amathuluzi kuthebhu ethi Faka. Ungasebenzisa amathuluzi kuthebhu Yokudweba ukudweba ekhasini mahhala.
Yenza kusebenze ipensela, ipeni, noma i-highlighter bese uchofoza futhi ukusetha i-trace radius, umbala wayo, nesitayela sayo. Bese uqhafaza bese uhudula ekhasini ukudala umdwebo wakho. Ungasebenzisa futhi ubujamo ukulahla imigqa, ukwakheka okujwayelekile, namashadi ngokuchofoza nokuhudula ekhasini, noma ukuguqula umdwebo we-freehand ukuze wakhe futhi udwebe i-freehand ube umbhalo ukuze uguqule umdwebo wakho wamahhala ube umumo noma umbhalo ofaneleka kakhulu.
Sebenzisa irabha ukususa umdwebo ngamunye ngokuchofoza kuwo. Manje ake sibone ukuthi ungawaphatha kanjani wonke amanothi nezinto ezingaphakathi kwekhasi usebenzisa ithuluzi lokukhetha ON kuthebhu yokudweba. Lokhu kuyasebenza futhi uma wenza kungasebenzi ithuluzi lamanje ngokhiye we-Escape.
Ungahambisa umbhalo, amatafula, namafayela ngokuchofoza nokuhudula kusuka ohlakeni olimpunga. Ungasebenzisa futhi imicibisholo ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukulungisa ukusatshalaliswa kokuqukethwe kwakho. Ukuhambisa izithombe, amadokhumenti e-PDF nemidwebo, mane uchofoze bese uwahudula.
Sebenzisa ama-node ayo amhlophe ukukala futhi usebenzise ithebhu yesithombe ukushintshanisa nokufaka izithombe nemibhalo ye-PDF ukusika, ukukopisha, ukunamathisela noma ukususa inothi, uchofoze nje kuso. Ungasebenzisa futhi i-oda ukulungisa ukuhleleka kokubonakala lapho izinto eziningi zigqagqana. Khumbula ukusebenzisa i-CTRL (noma i-CMD) ne-Z ukulungisa noma isiphi isenzo uma wenza iphutha.
Ukuhambisa nokukala izinto eziningi, nika amandla i-Lasso Selection ngaphansi kwethebhu ethi Dweba bese uqhafaza bese uhudula kunoma imaphi amanothi anentshisekelo ukuze uzikhethe. Ngemuva kwalokho ungafaka izinguquko zakho kulo lonke iqembu. Ukuthekelisa idokhumende lakho le-OneNote, sebenzisa inkinobho Yabelana ekhoneni eliphezulu kwesokudla, engeza ikheli le-imeyili ngqo, noma uthumele ikhophi nge-imeyili noma nge-Skype.
Ukuphrinta ikhasi elikhethiwe njengamanje, isigaba, noma incwadi yokubhalela, iya ku-Phrinta ngakwesokudla kakhulu, Setha i-Orientation kanye nosayizi wekhasi. Siyabonga ngokubuka le ndatshana! Ungathola okuqukethwe okwengeziwe nokumahhala ku-Microsoft Office 2019 kusixhumanisi sethu semiyalo encazelweni ye-athikili!
IMicrosoft izoyeka ukuthuthukiswa kweHhovisi 2016I-OneNote, ngakho-ke ikhiphele ngaphandle amathuba emisebenzi emisha noma ukwenziwa ngcono kwemali. Abasebenzisi beHhovisi 2016I-OneNoteuhlelo lokusebenza lwedeskithophu luzoqhubeka nokuthola iziqeshana nezibuyekezo zokuphepha.Juni 7, 2018
Yini okufanele uyenze uma i-OneNote ivulekile kukhompyutha?
Zama ukuqala kabusha ikhompyutha yakho bese uzama ukuvula i-OneNote yakho. uma inkinga isaqhubeka, ngikucebisa ngomusa ukuthi ulandele izinyathelo ezishiwo uRuxo kule ntambo elandelayo ekhuluma ngokuthi ungayikhipha kanjani i-OneNote. Sigcine sithunyelwe ngesimo senkinga futhi ngizojabula ukukusiza ngokuqhubekayo. Ngiyabonga.
Kungani inothi elilodwa lingavulwa ku-OneDrive?
Lapho ngizama ukuvula kuhlelo lokusebenza (nge-OneDrive online, ngokuchofoza amachashazi ama-3, bese 'uvule kuhlelo lokusebenza') ithi 'asikwazanga ukuvula lesi sigaba'. Okuxakayo ukuthi amanye amafayela wenothi avela encwadini eyodwa yokubhalela azovulwa, kepha amanye ngeke. Wonke amafayela adalwe ngonyaka ofanayo (2018).
Kungani i-OneNote ingavuli ifayela elishumekiwe?
Ngingeze amafayela ambalwa kusuka ku-PC yami yasendaweni (ngokuwahudulela ekhasini le-OneNote), kepha ngathola ukuthi lawa mafayela ngeke avuleke uma ngichofoza kabili isithonjana sokunamathiselwe ku-OneNote. Ngizamile lokhu futhi, ngibheka ngokucophelela ukuthi inketho ethi 'Shumeka ifayela' (hhayi isixhumanisi sangempela) ikhethiwe.
Ungayixazulula kanjani i-notebook engavumelanisi ne-OneNote?
Xazulula Izinkinga Zokuvumelanisa Lapho i-Notebook Ingavumelanisi 1 Vula uhlelo lokusebenza lwedeskithophu ye-OneNote. 2 Qhafaza kwesokudla incwajana bese ukhetha Kopisha Isixhumanisi ku-Notebook. Isixhumanisi sikopishelwe kubhodi yokunamathisela. 3 Vula isiphequluli sewebhu. 4 Iya kubha yekheli, unamathisele isixhumanisi esincwadini sokubhalela, bese ucindezela u-Enter. 5 Uma utshelwa, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Microsoft, yasemsebenzini noma yesikole.